Fihaonambe AICT : Nodinihin’ny komity ny handrindrana ny hetsika -
AccueilSongandinaFihaonambe AICT : Nodinihin’ny komity ny handrindrana ny hetsika
Fihaonambe AICT : Nodinihin’ny komity ny handrindrana ny hetsika
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE), tetsy Anosy, ny atrikasan’ny komity mpandrindra ny fihaonamben’ireo fitsinjaram-pahefana Frantsay sy Malagasy (AICT). Hetsika iraisam-pirenena hotanterahina eto Madagasikara, etsy amin’ny Hotel Carlton, ny 5 -7 marsa izao, izany.
Raha ny fanazavan’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Henry Rabary-Njaka, fanindroany amin’izao no nandraisan’i Madagasikara ity fivoriamben’ireo eo amin’ny sehatry ny fitsinjaram-pahefana. Fanintelony tamin’iny omaly iny kosa no nisian’ny atrikasam-panomanana ny fandraisana ny hetsika.
Nandritra izany atrikasa izany indrindra no nanaovana ny tatitra ny ezaka nataon’ny komity mpandrindra amin’ny fanomanana, ary koa niadiana hevitra amin’ny hanatsarana hatrany ny fandraisana sy hampirindra io fihaonambe AICT io.
Voalaza fa mikasika ny fiaraha-miasa amin’ny samy eo amin’ny sehatry ny fitsinjaram-pahefana no antom-pisian’ny Fihaonambe eo amin’ireo olom-boafidy sy olom-boatendry frantsay sy malagasy. “Ankoatra ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta, izay efa mipetraka an-taonany maro, fiaraha-miasa eny ifotony mihitsy no atao sy hamafisina amin’ity fihaonambe ity”, hoy ny minisitry ny MAE.
Ankoatra izay, dia nanazava ny andraikitry ny fitondram-panjakana amin’izany kosa ny minisitra, fa ny hampiakarana ny fiaraha-miasa eny ifotony no tena hifotorana. Izay indrindra no mahatonga ny MAE ao anatiny, izay mandrindra ankapobeny ny fiaraha-miasa. “Ao anatin’ny fitsinjaram-pahefana no tena mitondra fiaraha-miasa mivantana”, hoy hatrany ny minisitra.
Marihina fa miahy ity hetsika iraisam-pirenena ity ny Antenimeran-doholona amin’ny firenena roa tonta. Raha ny fanazavana hatrany, dia hitondra fampandrosoana goavana eto amin’ny firenena ny fisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry ny fitsinjaram-pahefana Frantsay sy Malagasy. Efa misy, ohatra, amin’izao fotoana izao, ny fiaraha-miasa eo amin’i Aquitaine, Frantsa, sy ny Faritr’Itasy eo amin’ny resaka famokarana ara-pambolena, sns. Ireny fiaraha-miasa rehetra indrindra no hanohanan’ny Fitondram-panjakana ny hetsika. Araka ny fanazavana ihany, dia ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no hanokatra amin’ny fomba ôfisialy ny fihaonamben’ireo fitsinjaram-pahefana Frantsay sy Malagasy, andiany faharoa.
Ao anatin’ny fety tanteraka ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao. Tsikaritra izany amin’ny fahamaroan’ny olona mifamezivezy eran’ny tanàna, mijery izay hahafinaritra ny fetin’ny tsirairay avy. Eo koa ny fahitana ireo kilalao, akanjo ary akoho amam-borona ...Tohiny